Musha waTapiwa Makore | Kwayedza
Musha waTapiwa Makore
08 Oct, 2020 - 17:10 2020-10-09T09:32:44+00:00 2020-10-08T17:09:10+00:00 0 Views
MUSHA waTapiwa Makore (Snr) (57) uyo ari kupomerwa kuponda sazita mwana wemunin’ina wake anova, Tapiwa Makore (Jnr) (7), achibatsirana nemufudzi wake wemombe Tafadzwa Shamba (40) unoratidza kuti wakatsvinda uye ndewe chizvino-zvino.
Tapiwa Makore (Snr) anonzi anorarama upenyu hweshoroma zvekuti vanhu vemudunhu iri vaisiita marikicho muminda yake.
Hama dzake dzinoti hadzaimbofungira kuti angasvike pakupara mhosva yaari kupomerwa iyi.
VaBarnabas Makore (49) vanoti mumwe wevanhu vaiita maricho pamba paTapiwa Makore (Snr) vachigadzira munda wanga uchida kuitwa chirongwa chekurima muriwo.
Musha waTapiwa Makore (Snr)
“Mukoma wedu uyu aiita basa rekutyaira matekisi kuHarare uye aigara kumba kwevabereki vake kuMufakose. Vadzimai vake variko kuHarare ikoko asi kusvika nanhasi havasati vauya kuzochema mwana. Tapiwa Makore (Snr) akauya kuno kumusha achiti akanga abatana neimwe kambani (zita tinaro) kuti varime makabichi nemumwe muriwo vachitengesa,” vanodaro VaBarnabas Makore.
VaTobias Makore (46), avo vakataura vakamira Sabhuku Makore, vanotsinhira nyaya yemushandirapamwe wekurima pakati paTapiwa Makore (Snr) nekambani iyi.
“Mukoma Tapiwa akagoboresa munda wepamba pake akatora zvakare munda wemupatya wake akarimisa zvichiitwa naTafadzwa Shamba nevamwe vemuno mumusha. Izvozvi pakatotarwa maraini ekuti padyarwe.
“Imba yake yekubikira yakapfirirwa nehuswa hwakachekwa naamai vemwana wavanonzi vakaponda uyu,” vanodaro VaTobious Makore.
Tapiwa Makore (Snr) anonziwo anopfuya huku dzemazai nedzenyama kumba kwavo kuMufakose.